ချက်ပြုတ်နိုင်တဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ကို ဘာ့ကြောင့်လက်တွဲသင့်သလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းရင်း (၅)ချက် - Lifestyle Myanmar
ကောင်းပြီ.. မင်းနဲ့ အချိန်ဖြုန်းရတာကို နှစ်သက်တဲ့သူတစ်ယောက်ကို၊ သွားလေရာမှာ လူတွေနဲ့ တော်တော်လေး ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနိုင်တယ်၊ ရည်မွန်ပုံရတဲ့ သူတစ်ယောက်ကို မင်းတွေ့ပြီ၊ ဒါပေမယ့် သူတို့ချက်ပြုတ်နိုင်သလား?
ဒါက Relationship တစ်ခုမှာ မိန်းမတွေအကြောင်း အများကြီးသိတာထက်ကို ပိုအရေးကြီးပါတယ်၊ ဘယ်လိုချက်ပြုတ်ရမယ်ဆိုတာကို သိခြင်းက သင်စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့တာထက်ပိုပြီး Relationship ကို ပွင့်လန်းစေနိုင်တဲ့ အရာတွေထဲက တစ်ခုပါ။ ဒီလောက်ရိုးရှင်းတဲ့အရာက ဘယ်လိုအရေးကြီးတာလဲ? ရှင်းပြပါရစေ။
၁။ ချက်ပြုတ်နိုင်တဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ကို သင့်သူငယ်ချင်းတွေနှင့် မိသားစုက အထင်ကြီးလေးစားပါလိမ့်မယ်
ဒီအချက်က သင့်ဦးစားပေးမှုများထဲက ထိပ်ဆုံးမှာ ရှိနေနိုင်မှာ မဟုတ်သော်လည်း သင့်ရဲ့ချစ်သူဟာ သင်နဲ့အနီးဆုံးရှိတဲ့ လူတွေကို အထင်ကြီးစေတဲ့အခါ ကောင်းတယ်လို့ ခံစားရပါတယ်။ တကယ်လို့ သူတို့က သင့်ချစ်သူကို နှစ်သက်မယ်ဆိုရင် relationship ကပိုလွယ်ပြီး သာယာချောမွေ့ပါလိမ့်မယ်။
၂။ သင့်အတွက် သူချက်ပြုတ်ပေးရင် သင့်ကို ချစ်ကြောင်းပြနေတာပါ
Relationship တစ်ခုမှာ “I Love You” ဆိုတဲ့ စကားလုံးသုံးလုံးကို မသုံးဘဲ တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်ကို စစ်မှန်စွာ ချစ်မြတ်နိုးကြောင်းပြသခြင်းက အရေးပါပါတယ်။ ချက်ပြုတ််ခြင်းက ယုံကြည်မှု၊ အသိုင်းအဝိုင်း၊ ရင်းနှီးမှု၊ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ရည်ရွယ်ချက်၊ အဓိပ္ပာယ်ရှိခြင်း စသည်တို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ဒီအရာတွေအားလုံဂက ပျော်ရွင်မှုတိုးပွားလာခြင်း၊ စိတ်ဓါတ်ကျဆင်းမှု လျော့နည်းခြင်း၊ အလုံးစုံသာယာချမ်းမြေ့ခြင်းစတဲ့အရာတွေနဲ့ ဆက်စပ်လျက်ရှိတယ်လို့ အမျိုးသား သိပ္ပံဖောင်ဒေးရှင်း၊ ဘွဲ့လွန်သုတေသနအဖွဲ့မှ Matthew Riccio ကရှင်းပြထားပါတယ်။
၃။ တာဝန်ဝတ္တရားတွေ၊ ပျော်စရာတွေကို မျှဝေနိုင်ပါတယ်
အရင်တုန်းကလူတွေေ ဘယ်လိုပဲ ယုံကြည်ခဲ့ကြတယ်ဆိုပေမယ် ချက်ပြုတ်ခြင်းက အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အလုပ်မဟုတ်ပါဘူး။ ကျားမ မရွေးတန်းတူညီမျှ မျှဝေနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင်ဟာ အလုပ်ခွင်မှာဖြစ်စေ၊ အိမ်မှာဖြစ်စေ ခက်ခဲတဲ့ နေ့တစ်နေ့ရှိပါက တာဝန်တွေကို လွှဲပြောင်းယူပြီး အကူအညီအနည်းငယ်ပေးနိုင်တဲ့သူတစ်ယောက် ရှိခြင်းက ကောင်းတယ်မဟုတ်လား? ဟုတ်ပါတယ်။ ချက်ပြုတ်ခြင်းက တော်တော်လေး ပျော်စရာကောင်းပါတယ် ။ ပြီးတော့ သူဘယ်လိုအစားအစာမျိုး ကြိုက်တတ်တယ်ဆိုတာလည်း ကိုယ်သိလာနိုင်ပါတယ်။
၄။ သူ့အကြောင်း သင့်ကိုပိုပြီး မျှဝေပေးနိုင်လာတယ်
Relationship တစ်ခုနှင့်ပတ်သတ်လာတဲ့အခါ အကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုက အခြားလူတစ်ယောက်အကြောင်းကို လေ့လာသင်ယူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေက တခြားသူတွေကို ကိုယ့်ဝါသနာတွေအကြောင်း ပြောပြရတာ နှစ်သက်ကြပါတယ်။ သင့်မှာ ထမင်းဟင်းချက်နိုင်တဲ့ ကောင်လေးရှိတယ်ဆိုရင် သူက သူပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အရာတစ်ခုခုကို မျှဝေပေးနိုင်ပါတယ်၊ ဒါက Relationship အတွက် တော်တော်လေးအရေးကြီးပါတယ်။ သူ့မှာ ဆွေစဉ်မျိုးဆက် လက်ဆင့်ကမ်းခံထားရတဲ့ မိသားစုဟင်းချက်နည်းလျှို့ဝှက်တွေ ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ (ဒါမှမဟုတ်) ဆော့စ် ပြုလုပ်ဖို့ ထူးခြားတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုကို သင်ယူခဲ့ရနိုင်ပါတယ်။ ချက်ပြုတ်နိုင်တဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့ အတူရှိနေမယ်ဆိုရင် ဖြစ်နိုင်ခြေတွေက အဆုံးရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။
၅။ အိမ်မှာ အတူတူချက်ပြုတ်စားမယ်ဆိုရင် သင့်အတွက် ပိုက်ဆံသက်သာပါလိမ့်မယ်
ကျွန်မတို့အားလုံးက ပီဇာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကြက်တောင်ပံကြော်ပဲဖြစ်ဖြစ် အွန်လိုင်းကနေမှာပြီး ချက်ချင်းလက်ငင်းစားလိုက်ရမှ ကျေနပ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒါတွေက ရေရှည်မှာ ပိုက်ဆံအများကြီးကုန်ပါတယ်။ အိမ်မှာ ချက်ပြုတ်စားတာက ငွေကုန်သက်သာစေတယ်။ ချက်အပြုတ်အတွေ့အကြုံတွေကို မျှဝေမယ်၊ အတူတူ ဟင်းလျာဖန်တီးမှုတွေ လုပ်ကြမယ်ဆိုရင် သင်တို့ရဲ့ အချစ်ရေးကို ခိုင်မြဲစေနိုင်ပါတယ်။